Hira sy mozikaPosté par Berïnson 2016-02-13 08:32
Hira iray nanana ny toerany teo amin'ny fiainan'ny tanora tamin'ny taona 90 ny hiran'i Poopy hoe Tsy hahita. Amin'ny feo malefaka nefa mahazo antoka ny fahamarinan'ny fiaikeny no ikaloany sy ihantsiany fa tsy misy tia ilay tiana toy ny fitiavany azy any ho any. Androany, efa dimy ambin'ny folo taona mahery aty aoriana, nanainga ny aingam-panahiko io hira io hamaly an-tonokalo sy hanamafy hoe Tsy nahita.
K'efa nahita izany ianao
Izay taona maro lasa izay?
Efa tsy nanadala anao aho
Fa hoe hahita any ianao
Olona iray hitia anao tahaka ahy
Mbola tia sy ho tia anao.
Ka nisy ve izany nahafoy
Toy izay nomeko anao?
Nisy ve nanambara
F'izy tsy ho leo anao,
Fa ny fitiavany anao
Naharesy ny ahy omaly?
Satria efa tsy nihazona anao aho
Dia izao mahita koa ianao:
Izaho irery no tena tia anao
Efa fantatro fa tsy hahita any ianao!
Ianao irery no tsy nanampo
Ny haben'ny foko tena tia anao!
Nafoiko ny amiko, nafoiko ny aiko
Raha nilaina ho anao.
Tena nanam-paharetana aho!
Izaho dia izaho irery no nahay,
Ary izao mizaka irery ireny nataonao!
Isaorana i Poopy noho ny hirany manohina fo sy saina! Hira tsy lany mamy!
Hira sy mozikaPosté par Berïnson 2014-07-13 11:15
Fahiny elabe, vao 18 taona monja aho, tsy mbola nisy niaraka tamiko dia efa tiako loatra ianao.
Efa ela ihany izay, efa nisy nitia ahy, efa nihoatra ny 30 aho, namikitra tsy nety hiala ianao.
Efatra amby dimy aho vao tamin'ny herinandro, nandao ahy ilay notiaviko, kanefa... kanefa...
...mainka lalim-paka ny fitiavantsika roa, hanjaka ho doria, fa maminao sy tiako, tiako ianao Mozika-ko.
Ny herin'ny mozika
Hira sy mozikaPosté par Lalasoa Berïnson 2011-03-11 19:56
Afaka telo minitra, hono, vao ho tonga ilay fiara fitaterana. Tsy hoe maika aho akory fa sady mangatsiaka ny andro no petsapetsa ny lalana noho ilay erika kely nilatsaka teo. Lava be ny telo minitra! Olona valo na folo eo ho eo no tsikaritro miara-miandry amiko eo, samy mangina sy samy miandry.
Tampotampoka teo, izay vao henoko, feo midoboka, midoboka, midoboka. Feo hafakely. Nitady ilay feo aho. Hay tao ambadik’ilay olona anankiray nisy ankizivavy mamindra moramora, hita hoe mitandrina ihany tsy hihetsika mafy nefa tsy mahafehy tena hijanona koa. Mihodinkodina moramora eo izy, mandona ngadona amin’ny tongony mipaika amin’ny tany petsapetsan’ny orana. Misy irony ”écouteurs” kely irony eo amin’ny sofiny. Miandry fiara fitaterana koa izy saingy mandinika ny fihetsiny aho, lavitra dia lavitra ny tontolo misy ireto namany miara-miandry aminy izy.
Hafakely ny fihetsiky ny vatany, mampita hery tsara, tsy ataoko hoe fifaliana, tsy ataoko hoe fihobiana, tsy ataoko hoe fandresena. Raha irery izy, mino marimarina aho fa nandihy nanaraka ny mozikany izy saingy ety an-dalana be olona ety ve moa? Na izany aza, fihetsika mampita hasambarana sy fahafaham-po no nanendrika azy. ”Ny herin’ny mozika”, hoy aho niteny irery nijery azy.
Nisosa moramora avy any ilay fiara fitaterana. Nijanona ho azy ilay fihetsika sambatra teo. Nafindrany toy ny famindran’ny rehetra ny tongotra hiakatra ny fiara koa ny tongony. Tafidina tety an-tany sahady izy! Tamin’ny segondra nahitany ny fiavian’ny fiara fotsiny.
Små citroner gula, an'i Kajsa Ingemarsson
Teny fohy, an'i Toetra Raja
Rehefa any ivelany Madagasikara
Je l'aimais, an'i Anna Gavalda
Voady taona 2011